OTU ESI EMEPỤTA ỤZỌ ỤZỌ NCHỌGHARỊ NA DESKTỌỌPỤ - ESI MEE - 2019
Otu esi emepụta ụzọ ụzọ nchọgharị na desktọọpụ
Enweghị ma ọ bụ nhụsịrị nke ụzọ ụzọ nchọgharị site na desktọọpụ bụ nsogbu nkịtị. Nke a nwere ike ime n'ihi na ị na-ehichapụ PC ahụ, yana yana ịchọtaghị igbe ahụ. "Mepụta ụzọ mkpirisi" mgbe ị na-etinye ihe nchọgharị ahụ. Ị nwere ike iwepụ nsogbu a site na ịmepụta faịlụ ihe nchọgharị weebụ.
Ịmepụta ụzọ ụzọ nchọgharị
Ugbu a, anyị ga-atụle nhọrọ dị iche iche maka esi edozi ihe ederede na desktọọpụ (desktọọpụ): site na ịdọrọ ma ọ bụ na-eziga nchọgharị na ebe achọrọ.
Usoro 1: zipu faịlụ na-ezo aka na ihe nchọgharị ahụ
Ị ga-ahụ ọnọdụ nke ihe nchọgharị, dịka ọmụmaatụ, Google Chrome. Iji mee nke a, meghee "Kọmputa a" gaa n'ihu:
C: faịlụ mmemme (x86) Google Chrome chrome.exe
I nwekwara ike ịchọta folda na Google Chrome dị ka ndị a: mepee "Kọmputa a" na n'ime igbe ọchụchọ wee banye "chrome.exe",
wee pịa "Tinye" ma ọ bụ bọtịnụ ọchụchọ.
Mgbe ịchọtara ihe nchọgharị weebụ, pịa ya na bọtịnụ òké aka ya ma họrọ na menu ndokwa "Zipu"na ihe "Desktọpụ (mepụta ụzọ mkpirisi)".
Nhọrọ ọzọ bụ naanị ịdọrọ ngwa ahụ. "chrome.exe" na desktọọpụ.
Usoro 2: Mepụta faịlụ na-egosi na ihe nchọgharị ahụ
Pịa bọtịnụ òké aka nri na mpaghara efu nke desktọọpụ ma họrọ "Mepụta" - "Ụzọ mkpirisi".
Window ga-apụta ebe ịkwesịrị ịkọwa ebe ebe ihe ahụ dị, n'ọnọdụ anyị, ihe nchọgharị Google Chrome. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Nyocha".
Chọta ọnọdụ nke ihe nchọgharị ahụ:
Anyị pịa "OK".
Na akara anyị na-ahụ ụzọ anyị gosiri na ihe nchọgharị wee pịa "Na-esote".
A ga-eme ka ị gbanwee aha - anyị dee "Google Chrome" wee pịa "Emere".
Ugbu a, na mpaghara ọrụ, ị nwere ike ịhụ ihe e dere na ihe nchọgharị weebụ, n'ụzọ ka ukwuu, ụzọ dị mkpirikpi maka ịmalite ngwa ngwa ya.
Ihe omumu: Esi weghachi ụzọ mkpirisi "My Kọmputa" na Windows 8
Ya mere, anyị na-ele anya na ụzọ niile ịmepụta ụzọ dị mkpirikpi na ihe nchọgharị weebụ na desktọọpụ. Site na oge a na ojiji ya ga-enye gị ohere ịmepụta ihe nchọgharị.